माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : कस्तो हुन्छ मतपत्र ? « News24 : Premium News Channel
माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : कस्तो हुन्छ मतपत्र ?
एक महिनामा के-के काम हुन्छन् ?
सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा त्यहाँका मतदाताले सोही प्रदेशका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिनुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्, यसमध्ये तीनजना महिला, एक दलित, एक अपांगता वा अल्पसंख्यक र तीनजना सदस्य खुलाबाट निर्वाचित हुन्छन् । जसमा तीन–तीनजना महिला र खुला सदस्य एकल संक्रमणीय विधिबाट निर्वाचित हुन्छन् । एकजना दलित, एकजना अपांगता वा अल्पसंख्यक बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीतमा पनि एकजना महिला हुनुपर्छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
कस्तो मतपत्र हुन्छ ?